Akwukwo Springs, Truck akwukwo Springs, Truck Suspension - DaDa
160 ụdị ụgbọala, 600 iche iche nke akwukwo mmiri, na-ike mere dị ka ndị ahịa ịbịaru.
Factory Price, Anụ Production, Omenala Work, Quality na nzipu nkwa, Obere Order Acceped
Juru n'ọnụ na pallet na waterproof akpụkpọ
Osisi pallet Safety ngwugwu n'ihi na njem
Ndenye Nkọwa Ebe nke Si Malite: Shandong, China Brand aha: DF Akwụkwọ ikike: 180 Days OE NO .: The ọkara trailer Type: TT, Suspension Spring Car Model: BPW Onodu: N'azụ Size: 18 * 120 Car Kpọọ: The ọkara trailer model Number: The ọkara trailer Spring ihe: Steel Shock Absorber Type: ndị ọzọ Tụkwasịnụ Ikike Tụkwasịnụ Ikike: 10 ton / tọn kwa Month Uru Leaf Springs Iji akwukwo iyi maka arọ ugbo ala bụ ezigbo na ịkwadebe ibu ihe karịrị a nnukwu ebe, nakwa na bụ ihe mere ha ji perf ...
Ndenye Ihe Ebe nke Si Malite: Shandong, China Brand aha: Dadaalloy Akwụkwọ ikike: 3 Ọnwa ole na OE NO .: TRA 2726 Type: TT, Suspension Spring Car Model: Trailer Ụgbọala Onodu: N'azụ Size: 20 * 75 Car Kpọọ: Truck Model Number: TRA 2726 TRA 2726: akwukwo mmiri The Importance of Leaf Springs Leaf iyi bụ ihe akụkụ nke ụgbọala na-nkwusioru usoro. Ha na-arụnyere na enyemaka support dum arọ nke ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọala. Akwukwo isi iyi na-enyemaka ịnọgide na-enwe taya ịkwụsị n'okporo ụzọ na mezie ...
DaDa Alloy Co., Ltd. na-pụrụ iche na-emebe na-eme Leaf Sring, Air Suspension, Mechanical Suspension. More karịa 15 afọ ahụmahụ. Anyị na-enye elu àgwà ngwaahịa na obodo ahịa na Europe, North America, South America, na Middle East, Africa wdg